ကြွေလွင့်သွားတဲ့ ဂူဟားရား ဟာ တလောတုန်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်ခဲ့တဲ့ ဆူလီရဲ့ ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေ
ကြွေလွင့်သွားတဲ့ ဂူဟားရား ဟာ တလောတုန်းက ကိုယ့်ကိုယ...
25 พ.ย. 2562 - 00:08 น.
အကြွေစောတဲ့ ကေပေါ့ပ်စတား နောက်တစ်ယောက် ထပ်မံဆုံးရှုံးရ
တောင်ကိုရီးယား ကေပေါ့ပ် အဆိုတော် ဂူဟားရား ဟာ ဆိုးလ်မြို့က နေအိမ်မှာ သေဆုံးနေတာကို ရဲက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အသက်၂၈နှစ်အရွယ် ကျော်ကြားသူ အဆိုတော် ဟားရာ တယောက် ဘာကြောင့် သေဆုံးရသလဲ ဆိုတာကို စုံစမ်း နေ ကြပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၆လ လောက်တုန်းကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေကြောင်းကြံမှု သံသယနဲ့ သူ့ကို မေ့မျောလျက် တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီတုန်းကတော့ သူ့ချစ်ပရိသတ်ကို သူက ပြန်လည် တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။
သူအလောင်းကို နို၀င်ဘာ ၂၄ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီမှာ သူ့နေအိမ်မှာ တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ယုံဟတ် သတင်းကို အခြေခံပြီး ဂမ်နမ် ရဲ ဌာနက ပြောပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အင်စတာဂရမ်မှာ ပရိသတ် တစ်သန်းခွဲ ရှိပြီး နောက်ဆုံး နို၀င်ဘာ ၂၃ရက် မနေ့က တင်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံရဲ့ အောက်မှာ "Good night" လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
၂၀၁၆မှာ ပြိုကွဲသွားတဲ့ ခါရာ အဖွဲ့ (ဂူဟားရာ - ယာ - ဒုတိယ)
သူဟာ နာမယ်ကျော် အမျိုးသမီး ဂီတအဖွဲ့ Kara ခါရာ ရဲ့ အဖွဲ့၀င်ဟောင်း တယောက် ဖြစ်ပြီး အဲဒီအဖွဲ့ကို ၂၀၀ဂ ခုနှစ်တုန်းက စတင် ဝင်ရောက်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့အဖွဲ့ဟာ နိုင်ငံတကာ စင်မြင့်မှာ အကြီးအကျယ် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဂီတ အဖွဲ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဂူဟားရားဟာ လတ်တလော တကိုယ်တော် အခွေ ထုတ်ထားပြီး ဂျပန်ကို သွားရောက် ဖျော်ဖြေခဲ့ဖူးပါတယ်။
သူရဲ့ အခွေကို ၂၀၁၅ တုန်းက ထုတ်ခဲ့ပြီး အရောင်းရဆုံး စာရင်းမှာ နံပါတ် ၅ နေရာမှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
အခုလ အစောပိုင်းတုန်းကလည်း Midnight Queen သန်းခေါင်ယံ ဘုရင်မလို့ အမည်ရတဲ့ သီချင်းတပုဒ် သူ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အတွင်း သူဟာ အနုပညာ ရပ်၀န်းကနေ ခပ်ခွာခွာ နေခဲ့တဲ့ အပြင် ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာမှာ လူထုကြား ချပြလို့ မသင့်တဲ့ သူ့ဗီဒီယိုတွေကို သူ့ရည်းစားဟောင်းက ချပြ အရှက်ခွဲမယ် ဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့် သူက တရားစွဲဆို ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူ့လက်တွဲဖော်ဟောင်း တယောက်က သူ့အပေါ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရ နှိပ်စက် ခဲ့သလို သူ့အပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့မှုနဲ့ ထောင်ကျခံရ နေရာက ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ တုန်းက အဲဒီပြစ်ဒဏ်ကို ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်လည်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ လတုန်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင် သေဆုံးသွားတဲ့ နောက်ထပ် ကေပေါ့ပ် အဆိုတော်တယောက် ဖြစ်တဲ့ ဆူလီ နဲ့ အလွန်အမင်း ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားတဲ့ အပေါ် တုန်လှုပ်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆူလီ သေဆုံးမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ နိုင်ထက် စီးနင်း ပြုမှု ဆက်ဆံမှုတွေကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်သွားတာ ဆိုတဲ့ သံသယတွေလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ ဂူဟားရား သေဆုံးမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူ့ပရိသတ်တွေက တုန်လှုပ်နေကြပြီး သူတို့ကြား ဟားရာ ရဲ့ ပုံတွေကို ဝေငှ နေကြပါတယ်။
ကမ္ဘာကျန်းမာရေး အဖွဲ့ အစီရင်ခံစာ အရ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေကြောင်း ကြံစည်မှုနှုန်း အမြင့်ဆုံး တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကြွေလွင့်သွားတဲ့ ဂူဟားရား ဟာ တလောတုန်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်ခဲ့တဲ့ ဆူလီရဲ့ ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေ